ESI ZỤTA WINDOWS 10 PRO MAKA DOLLAR 12 - WINDOWS - 2019
Esi zụta Windows 10 Pro maka dollar 12
Anyị na-agwa anyị otu esi azụ ụlọ ọrụ arụmọrụ 20 ugboro dị ọnụ ala karịa na weebụsaịtị Microsoft.
A bit banyere Windows 10 Pro
Otu esi zụta isi
Windows 10 Ọkachamara bụ mmemme dị mma nke Windows 10 Home. Nke mbụ, ka anyị na-emeso mmegharị ọhụrụ nke "ọtụtụ".
A na-ewere Windows 10 dịka sistemụ arụmọrụ nke jikọtara ike nke abụọ nsụgharị ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-abịaghị na ogwe aka nchịkwa G8 ga-enwe obi ụtọ na nloghachi nke kpochapụwo Malite. N'ozuzu, e mere Windows 10 iji hụ na nsụgharị site na nsụgharị mbụ nke usoro Microsoft dịka enweghị nhụsịrị dị ka o kwere mee. Ma ọtụtụ ọganihu dị ịrịba ama ka dị n'ebe ahụ. Nke a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke innovations:
Windows Ndewo. Ọrụ na-ahụ maka ọrụ nbanye. A na-akwado akara aka, iris ma ọ bụ ọdịdị ihu.
Hiberboot na InstaGo. Atụmatụ ọhụrụ nke Windows, ekele maka nke bu ụzọ bido na hibernate dị ngwa ngwa.
Anya Microsoft. Nbudata ohuru sitere na Microsoft, ezube iji dochie Internet Explorer. Na ngwa ngwa, na e nwere usoro pụrụ iche iji gụọ ihe dị mma.
Kọmputa desktọpụ. Ọrụ ahụ, nke dịworo ogologo oge iji nweta macOS. Ugbu a na Windows, ị nwere ike ịgbanwe ọ bụghị naanị n'etiti windo mmemme, mana ịkekọrịta ọrụ na ìgwè ha na kọmpụta dị iche iche arụmọrụ.
Ngwa Xbox. Na Windows 10 PC, ị nwere ike igwu egwuregwu Xbox One ma soro ndị ọzọ egwu egwu, dịka na Xbox Live. Ma "otu iri na abuo" na-akwado DirectX 12 ma nwee ike idekọ na-agafe site n'enyemaka nke ihe eji eme ihe dị egwu Game DVR.
A pụkwara iji mbipute pro ahụ mee ihe dịka nsụgharị ụlọ. Ihe ndi ozo di iche na Home bu ihe ngwọta maka ulo oru di nta na nke uzo. Lee ụfọdụ n'ime ha:
Onye na-emechi windo. Ngwaọrụ Ngosipụta Diski Ike. Maka ndị na-echekwa ozi dị mkpa na kọmputa.
Nweta ohere. Windows 10 Pro na-enye gị ohere ijikwa kọmputa ma jikọọ na ọzụzụ, ngalaba azụmahịa ma ọ bụ Azure Active Directory iji rụọ ọrụ na faịlụ netwọk, sava na ndị na-ebi akwụkwọ.
Kọmputa dị mma. Windows 10 Pro na-akwado Hyper-V - usoro maka iji igwe arụmọrụ. Ọ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ n'ọtụtụ sistemụ arụmọrụ n'otu kọmputa.
A ikikere nke Microsoft na-akwụ ụgwọ $ 200, ma ị nwere ike ịzụta isi ihe dị ọnụ ala karịa na ụlọ ahịa Goodoffer24.com.
Ndị niile na-agụ akwụkwọ Pcpro100 Goodoffer24 na-enye ego ruru ego 15% na koodu nkwadoMGPcpro10015.
Dịka ọmụmaatụ, ebe a bụ igodo dị iche iche maka ngwanrọ Microsoft, a na-egosi ego maka ego.
Windows 10 Pro Ọrụ CD-KEY (32/64 Bit) -11.89 $
Microsoft Office 2016 Pro Professional Plus CD-KEY (1 PC) -26,93 $
Microsoft Office 2019 Professional Plus CD-KEY (1PC) -60,29 $
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro -Bundle $ -33.16
Microsoft Office 365 (1 Year) 1 Ngwaọrụ (WIN / MAC) - $ 20.11
Nke mbụ, cheta na igodo ahụ abụghị ihe nkesa. Windows kwesịrị ibudata site na weebụsaịtị Microsoft.
Ịzụta isi na Goodoffer24, gaa na ngwaahịa ngwaahịa ma gbakwunye ya na ụgbọ.
Na nkọwa nke iwu ahụ, anyị na-ahụ Pọnye Nhọrọ Ego - ọ bụ n'ebe ahụ na ị ga-achọ ịbanye koodu nkwado maka enweghị ego.
Code a na - arụ ọrụ - ọnụahịa ahụ arịgoro na $ 11.89.
Ọ na-anọgide na-aga site na usoro ịkwụ ụgwọ omenala: mmalite nke nkọwa ụlọ akụ na nkwenye ịkwụ ụgwọ. Isi ihe ga-abịa email. Ihe niile, ịnwere ikikere. Ọ na-anọgide na iji rụọ ọrụ ya mgbe ị wụnye Windows.
Ịmepụta windo ngwa ngwa na Kaspersky Rescue Disk 10
Ụkpụrụ Onye na-eme 4.0.6
Kedu ka esi kpochapụ ndekọ ahụ?
Steam na-enye ohere zuru oke iji melite akaụntụ onye ọrụ, interface ngwa, wdg. N'iji ntọala Steam ị nwere ike ịhazi mpaghara egwuregwu a maka mkpa gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịtọpụta ihe a maka ibe gị: ihe ga-egosipụta na ya maka ndị ọrụ ndị ọzọ. I nwekwara ike ịhazi ụzọ iji kwurịta okwu na Steam; họrọ ma ọ ga-agwa gị ozi ọhụrụ na Steam na ụda olu, ma ọ bụ na ọ ga-abụ oke ụda. GụKwuo
Esi kpochapụ akụkọ ihe mere eme na Google Chrome